Maxamed Mubarak | marqaati | Baal 2
U gudub dhigaalka
Ololaha Digitalka ah ee La-Dagaalanka Musuq Maasuqa
Soo sheeg musuqmaasuq
Arkiifiyaha Qoraaga: Maxamed Mubarak
Qormooyin cusub →
Musuqmaasuq Dilaa Ah
Sameynta warbixintaan waxaa ay ku qaadatay 10 mutadawiciin ee ka tirsan hay’adda marqaati kuwaas oo raacay gaadiidka dadweynaha ee kala goosha xaafadaha magaalada Muqdisho iyo wadada aada Afgooye, Balcad, iyo Ceel Macaan. Waxaa aay qaadatay 29 maalin in la cadeeyo goobaha ka muuqda qariirada la socoto warbixintaan oo ah meelaha lagu qaado lacago sharci daro ah ee aan aheyn canshuur dowladeed. Waxaa kaloo la wareystay dad gaaraya 40 ee isugu jira darawaliin iyo shacab caadi ah ee wadada isticmaalayay si loo xaqiijiyo in goobaha xusan ay yihiin kuwo si caadi ah wax loogu qaado.
Intaa ku guda jirnay baaritaanadeena waaxaa inoo cadaatay inta hoos ku xusan:
Ciidamada qalabka sida ee dowlada in ay ka qaataan lacago sharci daro ah gaadiidka dadweynaha iyo kuwa xamuulka ee isticmaala goobaha ku calaameeysan qariirada.
Qaadashada lacagaha sharci darida ahi waxaa ay caqabad ku tahay amaanka maadaama aysan wado ka xirneyn lana baarin ninki lacag bixiya.
Ciidamada amaanka inta badan ma bixiyaan lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha hadii ay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha.
Waxaa ay qaataaan lacago sharci dari ahi iyo ku raacaan gawaarida dadweynaha iyaga oonan bixin lacag iyaga oonan la dhuuman, taasi oo dadka kalsoonida ay u qabaan dowlada lumineysa.
Dhamaan lacagaha sharci darida ahi waxaa lagu qaataa goobo lagu ogyahay ciidamada amaanka ama goobo u dhaw.
Waxaa ku sameeynay baaritaan qaatay 29 maalmood 12 goobo ay si toos ah ugu sugan yihiin ciidamada amaanka kuwaas oo loogu tala galay in lagu baaro gawaarida ama lagu qaado lacago canshuur ah. Sidoo kale waxaan aragnay in intaas kabadan oo ah goobooyin soo boodo ahi kuwaas oo lagu qaado lacago sharci dari ahi. Meelaha soo boodka ahi hadaan la arag 3 maalin oo isku xigta ma aanan ku xusin qariirada.
Waxaa ka qeyb qaatay baaritaankan 10 mutadawiciin oo wareysi hoose la yeeshay 40 qof isticmaala wadooyinka. Lacagaha sharci darida ahi ee lagu qaado wadooyinka kama yara 3 kun ee doolarka mareykanka ahi labadii saac maalinti oo ah inta saacadood ay wadooyinka ku sugnaayeen baareyaasha mutadawiciinta ahi. Taasi micnaheeda waxaa weye in maalinti lacagaha sharci darida lagu qaado aay si aad ah uga badan tahay 3 kun oo doolar.
Lacagaha aan aragnay halki mar waxaa u yaraa 5000 shillin Soomaali (0.25 doolar), waxaana u badnaa 1000,000 shilin Soomaali (50 doolar). Eeg qariirada hoos ka muuqata:
View Illegal Money Collection Points In and Around Mogadishu Iyadoo ah qariirad weyn
Halkaan guji si aad u aragto sawiro askar ku mashquulsan laaluush qaadasho
Tani waa mid joogto ahi taas oo wiiqeeysa dhaqaalaha dalka qatarna galineysa amaanka magaalo madaxda.
Inta badan goobaha lagu qaado lacagaha sharci darida ahi ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda waa gobo isticmaalaya dabool sharciyeysan.
Meelaha qaar waa goobo loogu talo galay in lagu baaro gaadiidka hadane aanan lagu baarin oo lacago qura loogu qaado. Taasi waxaa marqaati ka ahaa mutadawiciinta marqaati ee aanan la baarin mar qura 29ka maalin ay ku guda jireen baaritaankaan. Xitaa xiliyada ee jirto cabsida oo la xiro wadooyinka qaarkood waxaa marqaati aheyn iyada oo booliska wadada ilaalinaya qaadanayaan qaarkood waxa ay ugu yeeraan “shaah” si ay u fasaxaan gaadiidka dadweynaha ee bixiyo lacagta shaah.
Waxaa cad in baaritaan la’aanta gawaarida ee goobaha loogu talo galay kuwaas oo ku mashquulsan laaluush qaadasho ee si weyn u wiiqeeyso amaanka magaalada Muqdisho. Eeg qariiradaan si aad u aragto goobo ka tirsan kuwi la weeraray ee qaraxyada ka dhaceen inti aan ku guda jirnay baaritaankaan.
View Selected Attacks From June to July Iyadoo ah qariirad weyn
Jidgooyooyinka qaar ee sharciga ahi waxaa lagu eegaa in gaadiidka dadweynaha ay iska bixiyeen canshuurta dowlada iyo in ay u sharciyeysan yihiin shaqadooda. Qaar badan oo ka mid ah gawaarida dadweynaha ee ka shaqeeya Muqdisho ma sharciyesna darawaladoodane malahan laysen, sidaasi darted waxaa ay u nugul yihiin booliska wadada kuwaasi oo handada hadane wax ka qaato markeey doonaan.
Markaan aragnay culeyska dhaqaale iyo qatarta dhinaca amaanka ee la xiriira isbaarooyinka lagu qaado lacagaha sharci darida ahi waxaan soo jeedineeynaa arrimahaan hoos ku qoran:
In la hormariya aqoonta ciidamada lagu aaminay qalabka lagana saaro kuwa ay ku cadaato tuugnimo.
In la siiyo ciidamada amaanka mushaarkooda buuxa bil walba.
In laga mamnuuco qaadka ciidamada amaanka maadaama aysan waxba iska badaleyn hadii la siiyo musharkooda waqti ku haboon iyaga oonan laga joojin qaadka.
In la sameeyo qeyb ka tirsan wazaarada arrimaha gudaha taasi oo raadisa, baarta, xarigna u geeysata ciidamada amaanka ee qaata lacagaha sharci darida ahi.
Hadaan nahay marqaati waan ognahay in fulinta arrimaha kor ku xusan waqti aay qaado doonto laakiin waxaa aaminsan nahay in aay waajib tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan tilaabooyin loo qaado si dhibaatadaan taagan oo ah ciidamada amaanka oo si bareer ah shacabka lacag sharci daro ahi uga qaadanayo loo joojiyo.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Agoosto 26, 2013 uu qoray Maxamed Mubarak.
Marqaati.org taarikhda si rasmiga ah ay u shaqo bilaabi doonto
Marqaati.org waxeey si rasmi ah khadka u soo gali diintaa 26da Agoosto 2013.
6 years, 10 months, 8 days, 19 hours, 37 minutes ago
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Agoosto 9, 2013 uu qoray Maxamed Mubarak.
Website also available in:
marqaatiSomalia Curbing Corruption: Minor Gains https://t.co/Hz6jcus8ap #Somalia #SomaliaCorruptionReport
marqaatiSomalia In 12 hours: our annual report on accountability in #Somalia will be published. It includes our forecast for 2020 a… https://t.co/UFfZyEeryt
marqaatiSomalia Ahead of the release of our annual report on accountability in #Somalia, we held a well-attended event to mark the… https://t.co/ExlbFlYzY1
marqaatiSomalia RT @farhatahir: This report on corruption and government accountability in Somalia is incredibly disheartening. Hard to see how quickly the…
marqaatiSomalia RT @somalianalyst: Corruption in government continues unabated- report - https://t.co/AhKRPGF42h
Ammaanta taabbagelinta waxaa leh WordPress